Enwere M Social Media Ikpe mara | Martech Zone
Enwere m ikpe ọmụma. Mba - ọ bụghị ikpe ọmụma na m gaara anọrịrị di na nwunye na ego na foto kama ịse foto m. Ọ bụ ikpe mara na anaghị m esonye na netwọkụ m.
Google+ enyebeghị aka. Ọ dịka ọ dị ugbu a, m ga-aga n'ihu na mkparịta ụka na 5 mahadum karịa ol 'anọ m blog, Facebook, LinkedIn na Twitter. M nnọọ banyere maka Spotify… na m nụrụ Pandora na-launching a na-elekọta mmadụ na netwọk anya. Ana m ejikwa netwọk mmekọrịta maka Ugbo mmiri.
A Nchikota tọn ọrụ na-arịa ọrịa ikpeazụ izu ole na ole ka m jupụtara na ikpe ọmụma… Anaghị m agwa gị. Anaghị m ejikọ gị. Anaghị m eme akụkụ m iji nyere gị aka inwe mmasị na m. Oh na na… M tufuo a crapload nke infographics iji mee ka ị nwee mmasị… na a ole na ole kwesịrị ekwesị njikọ ebe a na-ekwu okwu na. Mana ama m na anaghị m eme ihe niile iji chebe gị.
The ikpe ọmụma na-egbu m.
Anaghị m egwu egwu. Achọrọ m ka ị mata n'ihi na ị nwere ike ịgafe otu ihe ahụ. M na-anụ ndị folks oge niile na-ajụ m, "Kedu ka ị si enweta oge ahụ?". Ọ dịghị mfe. N'ezie - n'agbata ọrịa, ịga mba ofesi, ịkwaga ebe obibi, ịbụ nna, ikwu okwu n'ihu ọha, ịgba ọsọ na redio, ime mmepe, ịga ịkpọ ahịa, ide maka mbipụta na n'ezie imezu nkwekọrịta anyị na ndị ahịa nwere… M n'idebeghi. Ekele dịrị m na ndị ọrụ m, ndị enyi na ndị ahịa nwere nghọta na atụmanya ndị na-anagide m.
Yabụ ihe izizi ị ga-aga bụ atụmatụ ahụ butere m ebe m nọ… ebe m nọ. Maka oge a, amaara m na m nwere ike iburu obere bọọlụ ma m ga-alaghachi azụ. Ma ọ bụrụ na m gaa n’ihu ịkwagide ọnwụ oge a, ọ ga-enwe mmetụta na-adịghị mma n’ihe ọ bụla m na-eme. Aga m eme nke ọma. Ekwere m gị nkwa. Ahapụla m - ị hụbeghị ezigbo m anya na nso nso a ma enwere m ike ijide gị na ụfọdụ nnukwu ihe na-abịa n'oge adịghị anya! Nọgide na gburugburu.
Ọzọkwa… ndo banyere foto ahụ. Enweghị m oge m gafere site na saịtị foto ngwaahịa. Ọ bụ 10:40 PM… M na-ala n'ụlọ ugbu a.
Tags: ọkụmgbalielekọta mmadụ mgbasa ozi ikpe
Julaị 19, 2011, elekere 5:15 nke ehihie
O wutere m ya mere m budata foto gị wee bulite ya na iStockPhoto. Yabụ ugbu a ọ bụ * foto ngwaahịa! (na-egwu egwu n'ezie)
Julaị 19, 2011, elekere 5:58 nke ehihie
Geek Kọmputa Indy
Julaị 22, 2011, elekere 12:46 nke ehihie
Wetuo obi, nweta ume. Makụọ ụmụntakịrị, susuo nwunye ọnụ, lee ogologo anya na egwu ọhụrụ ahụ. Ndị dị mkpa ka ga-anọkwa ebe a, echi.